प्रचण्डले भने - गिनिज बुकमा मेरो नाम लेखिने रहेछ ? - Namaste Times
बुधबार, पौष ०४, २०७५ | Monday, March 12, 2018
प्रचण्डले भने – गिनिज बुकमा मेरो नाम लेखिने रहेछ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २८, २०७४ समय: ८:१०:२२
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी लीलाई प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाइ बढी मत प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका हुन्।
०१५ सालमा बीपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारपछि ५९ वर्षमा पहिलोपटक मुलुकले बलियो सरकार पाएको छ। ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमतीय आधारमा प्रतिपक्षबिनाको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, चुनावी प्रतिस्पर्धापछिको पहिलो बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका ओलीले पाएका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
जवाफमा ओलीले कटाक्ष गरे। कांग्रेसका युवा नेता गगनको उमेरजति आफूले लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्दै लोकतन्त्र मास्ने कुनै पनि आशंका नगर्न आग्रह गरे। कार्यान्वयन गर्न नै चुनावी घोषणापत्र बनेको उनले बताए ।